Dika Diego Maradona Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Dika Diego Maradona Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Ihe omuma anyi nke Diego Maradona na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, umu nwanyi na ndi nwunye, ndu onwe onye na ndu ya.
N'okwu doro anya, anyị na-ewetara gị akụkọ mbubreyo Diego Maradona, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Diego Maradona Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Maka Biography Starters, ọ na-utu aha 'Obe Ogba'. A mụrụ Diego Armando Maradona na October 30, 1960, na Villa Fiorito, ógbè Buenos Aires nke dị na Argentina, ndị nne na nna, Don Diego (Nna) na Dalma Salvadora Franco (nne).
A mụrụ ya dị ka ise n'ime ụmụ asatọ na ezinụlọ Roman Katọlik. Aha mbụ Maradona sitere na Grik na Hibru.
Ọ pụtara ma ọ bụ onye na-akwado ya (iweghara ọnọdụ onye ọzọ) ma ọ bụ onye nkuzi. Aha ya bụ Armando - ọ pụtara “Nwoke agha”
Maradona tolitere na ezinụlọ ya dara ogbenye ma dị nso na Villa Fiorito. Ezinụlọ ya so na ndị dara ogbenye n'obodo ahụ na ha nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu.
Nna Diego bụ Don Diego bụ onye na-akpụ brik na onye ọrụ mmepụta ihe, bụ onye gbalịsiri ike inye ụmụ nwoke atọ na-arụsi ọrụ ike, ụmụ nwanyị ise, na nwunye ụlọ ụlọ ya, Dalma.
Otú ọ dị, ịda ogbenye abụghị ihe na-egbochi ịga nke ọma. Maradona kọntaktị mbụ na bọl bịara mgbe e nyere ya bọl bọl nke mbụ site na nwanne nwanne ya, Beto Zarate.
Nke a mere na ụbọchị ọmụmụ nke atọ ya. Nwa okorobịa Diego dinara na bọl n'ime uwe elu ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 6 iji zere ka ezuru ya.
Ndị nne ya na-ejide bọl a mgbe ụfọdụ chọrọ ka ọ lekwasị anya n'ọmụmụ ihe na ndị ọzọ ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ajụjụ.
N'oge na-adịghị anya tupu ya emesịa mata football bụ ọkpụkpọ ya.
Ọ na-amasị ya ịgba bọl mgbe ọ dị obere.
Mgbe ọ dị afọ itoolu, ọ mụtara ịkụ bọl. Njikọ mbụ ya na egwuregwu bọọlụ zuru ezu bịara mgbe a gwara ya ka ya sonyere ndị otu obodo ya aha ya "Obere yabasị".
Mgbe ọ nọ na obere obere, ọ na-edu ndị otu ya iji merie 140 egwuregwu ziri ezi.
Jose Antonio Reyes nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Omume dribbling ọma, enyemaka dị ike, ụzọ ziri ezi na nnukwu ọrụ ụkwụ mere Diego Maradona ka o bilie n'ọkwá n'ime obere oge n'oge ọ bụ nwata.
Ndị na-ege ntị nwere ekele maka nka ya bụ ndị tụrụ n'anya ịhụ ka nwatakịrị a na-agba ọsọ gabiga ọtụtụ ụmụaka toro ogologo.
N'oge na-adịghị anya, akwụkwọ akụkọ akụkọ bọọlụ bipụtara otu isiokwu kwuru; "Enwere nwatakịrị nwere àgwà na talent nke kpakpando", ọ bụ ezie na ha edehiere aha ya "Caradona".
Diego Maradona Ndụ Ezinụlọ:
NME: A mụrụ Diego Sr. na Esquina, Corrientes, ma ruo ọtụtụ afọ, ọ na-eji ụgbọ mmiri na-ebugharị ndị njem na-ebufe ụgbọ mmiri nke ọ na-agba na mmiri Argentine.
Ọtụtụ ndị elewo ya anya dị ka nwoke mepụtara nrọ Diego. Ọ chụrụ nnukwu ego n'àjà mgbe ọ malitere ọrụ nwa ya.
Ọ rụrụ ọrụ ọtụtụ awa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji hụ nwa ya. Ọ maara na nwa ya dị mkpa na Argentine football dị oke mkpa. Nke a bụ ihe kpatara na Ya na nwunye ya anaghị echefu egwuregwu ọ bụla nke nwa nwoke.
“Onye kasị chọọ ya ka o merie bụ m. Emere m akpụkpọ ụkwụ ya ma echere m na ọ nwere ike ịfefe Pele ma ọ bụ na ọ ka mma. Ka oge na-aga Pele hapụrụ uche m, ” o kwuru.
Nna ahụ nọkwara n'ụbọchị kachasị mkpa nke ndụ Maradona, mgbe ọ gbanwere ihe mgbaru ọsọ abụọ na mmeri 2-1 England na World Cup nkeji iri na anọ na 1986.
"Onweghi onye ji aka ya hụ goolu ahụ, ọbụnadị m. Ọ bụ obere bọọlụ aka na mgbe ha gosipụtara ya ọzọ, ọ dịka ọ dọpụtakwara aka ya."
Ọ ghaghị ịta ahụhụ site na nsogbu nwa ya na-eri ahụ riri ahụ na nsogbu ahụike, mana ọ na-ekwusi ike na Diego nọ "Ezigbo nwa nwoke pụrụ iche".
"Ọ na-enye m mpako na-enweghị atụ, n'ihi na nwa ewu nke si n'apịtị pụta, ka ụwa niile wee cheta ya, enweghị ọnụ." Ọ bụ ezigbo enyi onye ọ bụla gụnyere Lionel Messi.
Don Diego, bụ nna akụkọ egwuregwu bọọlụ bụ Diego Maradona, agabigala otu ọnwa ọ nọrọ ụlọ ọgwụ.
Akụkọ gosiri na ọ lụrụ ọgụ megide nsogbu iku ume na obi. Ọnụ ọgụgụ ahụ bụ 87 afọ mgbe ọ nwụrụ.
Ọ lụrụ Dalma Salvadora Franco, ma mụta ụmụ asatọ bụ; Ana, Rita (Kitti), Elsa (Lili), María Rosa (Mary), Raúl (Lalo), Hugo (Turco) na Claudia (Cali), nakwa n'ezie Diego Armando, "Pelusa".
Ụmụaka na-eto eto na-akọ akụkọ eziokwu
Gwa eziokwu; ọ dịghị onye ọzọ ma ọ bụ ihe omume ọzọ nwere mmetụta ka ukwuu karịa Dalma Salvadora Franco, nke a kacha mara amara 'Dona Tota', na ọrụ na ndụ nwa ya nwoke.
Nkwanye ùgwù a bụ ụtụ kwesịrị ekwesị nye nwanyị ahụ karịrị onye ọ bụla ọzọ ịlụ ọgụ iji mee ka nwa ya nọrọ n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, o yiri ka ọ gaghị ekwe omume.
O siri ike ikwubiga mmetụta nke nne 'El Diego na-eme ya nwoke ọ bụ taa.
Agbanyeghị na afọ 35 gara aga, Maradona n'onwe ya gbalịrị ịkọwa ịchụ na mbọ nne ya gbara iji chebe ya na ụmụnne ya ise na mpaghara Buenos Aires nke dị na obodo Villa Fiorito. Nke a bụ otu n'ime okwu obi ya maka nne ya.
Ricardo Kaka Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
“Mgbe m dị afọ 13, achọpụtara m na nne m enwetụbeghị afọ mgbu,” Diego ga-amalite, na-echeta otu n'ime akụkọ akụkọ ọma banyere nne ya.
“Afọ emebeghị ya, ọ chọrọ ka anyị rie. Oge ọ bụla nri ga - apụta, ọ ga - asị 'afọ m na-afụ ụfụ'.
Nso nsu! Ọ bụ n'ihi na ezughị ezu ịgagharị. Ọ bụ ya mere m ji hụ agadi nwanyị n'anya nke ukwuu. ”
Nne ya nọ ya maka ya n'oge ọ bụla ọ na-arụ ọrụ. Ọ ga-ahapụ ụmụ ya ndị ọzọ ka ha nọrọ na Diego.
Mgbe ya na ya nọrọ, ọ lụrụ ya ọgụ n'otu n'otu maka ịchịkwa ụdị ọgwụ ọjọọ riri ahụ na 0 opekata mpe.
Ọ bụ ya mere Maradona ji ghara ịla ezumike nká n'oge n'ihi ọgwụ ọjọọ. Maradona lebara anya na ị hisụ sịga ya na ya. Ọ nwere ike ijikwa sịga sịga nke anwụrụ.
Maradona hụrụ nne ya n'anya nke ukwuu nke na ọ nwere ike isutu ya ọnụ ọbụna n'ihu ọha na-ahụ n'anya iji mee ka ọ hụ nne ya n'anya. Nke a, ọtụtụ ndị enweghị ntụsara ahụ.
Ọ nọnyeere ya ọbụna ruo n'àkwà ọnwụ ya. Nne Maradona n'oge ọ bụ nwata jiri ọtụtụ oge gaa n'ụlọ ọgwụ n'ihi nsogbu akụrụ.
Nne nwanyị Argentine ahụ nwụrụ na Satọdee 19th November, 2011, ụbọchị mgbe a kpọgara ya n'ụlọ ọgwụ maka ọdịda akụrụ.
Raul Maradona: Ọ bụ nwanne nwanne Maradona. Ọ na-egwuri egwu na Argentina Boca Juniors, na Spain maka Granada, na Peru maka Obodo Deportivo; ọ na-egwuri egwu na Japan, Canada na Venezuela.
Hugo Hernán Maradona: Nwanne nwoke nke ozo nke a muru na 9th nke May 1969. A makwaara ya El Turco. Ọ bụ ya na nwanne ya nwoke bụ Diego dị egwu.
Ọ bụ otu mgbe bụ Argentina Onye nchịkwa na-ahụ maka egwuregwu na onye ọkpụkpọ. Ọ na-egwuri egwu dika midfielder n'ihi na klọb na South America, Europe, Japan, na Canada, ọ bụkwa onye so n'Òtù Mba U-16 Argentina.
SISTERS: Diego Maradona nwere ọnụ ọgụgụ ụmụnna nwanyị 5 dịka ị nwere ike ịhụ n'okpuru ebe a.
Ọ nwere ụmụnne nwanyị ndị okenye atọ na ụmụnna nwoke abụọ tọrọ.
Diego Maradona na Claudia Villafane Storyhụnanya Akụkọ:
Diego Maradona jere ije ụkwụ ya na ogologo oge ya n'obi Claudia Villafane na November 7, 1984.
Ha abụọ bikọtara ọnụ n'ịhụnanya na n'udo. Ya na ya nọnyere ya ma hu ya site na otutu nsogbu ya.
A gọziri di na nwunye ụmụ nwanyị abụọ, Dalma Nerea na Giannina Dinorah.
Dalma Maradona bụ onye omeebe na onye ọbụ abụ nke Argentine. Amuru ya na abali abuo n’ime onwa Eprel, 2 na Barrio Norte, Argentina.
Ọ malitere ọrụ ịgba egwu na ụlọ akwụkwọ ihe nkiri ihe nkiri Hugo Midón. Ọ gara n'ihu inweta akara ugo mmụta ya na Instituto Universitario de Arte.
A maara ya nke ọma maka iweta ndụ Sofia na usoro ụmụaka Cebollitas.
A mụrụ nwa ya nke abụọ, Giannina Maradona na 16th nke May, 1989. A kpọbatara ya Sergio Aguero na 2008 site n'aka Diego Maradona, ha abụọ yiri ka ha na-emekọ ngwa ngwa.
Giannina lụrụ Sergio Aguero na 2008, a mụrụ nwa ha nwoke Benjamin na 2009. Di na nwunye gbara alụkwaghịm na 2013.
Diego Maradona na nwunye ya bụ Claudia Villafane maara na ha lụrụ ruo afọ 15 ma gbaa alụkwaghịm na 2004.
Mgbe ha na-agba alụkwaghịm, o kwupụtara na ya nwere nwa na-ezighi ezi, Diego Sinagra, onye na-egwu bọl na Italytali (dị ka ọ na-ede oge).
Ejikwa nwa nwoke ọzọ, bụ Diego Fernando, gọzie ya na 2013 site na onye ya na Veronica Ojeda nke oge ochie.
Site na 1980 ruo 2004, ọ nọgidere bụrụ onye ọgwụ ọjọọ riri ahụ, nke metụtara ahụike ya na arụmọrụ ya n'ụzọ na-adịghị mma.
Agbanyeghị na ọ kwagara Cuba wee gbalịa ịgbaso atụmatụ ịhazigharị ọgwụ, ihe adịghị ka ihe ka mma ebe ọ tara nnukwu ahụhụ myocardial na-esochi ọgwụ cocaine na 2004.
Maradona nwere ụmụ abụọ - n'ụzọ iwu. N'ime agwa ambivalent dị ntakịrị banyere nna ọ sịrị: "Ụmụ m ndị ziri ezi bụ Dalma na Giannina. Ihe ndị ọzọ bụ ngwaahịa m na ego m. "
Nke a kpasuru nwa ya nwoke na-ezighi ezi iwe, Diego Sinagra n'oge mkparịta ụka ogbako.
Diego Maradona Biography Eziokwu - Nchịkọta Ọrụ:
Ọtụtụ agbanweela mgbe ya na Little Onions gwụchara. Mgbe ọ dị afọ 12, a họpụtara ya ka ọ kpọọ Los Cebollitas.
Ndị na-ege ya ntị nọgidere na-enwe ekele maka nkà ya. Mgbe ọ dị afọ 15, ọ nwere ohere ịme ọkachamara ya na Argentinos Juniors.
Ọ duru ndị Los Cebollitas gaa na otu narị na iri atọ na isii, na-egosipụta ikike ya na nka ya.
Ema ama ama ọfọn ufọk ufọk mîbọhọke ye mînyenekeke ndidọhọ ke enye ama ekeme ndinam utom ukpeme ke idem esie ye mbon e ¯ nwen, Maradona ama ada mme us u ¯ nwed ke ediwak mm o ke Argentina.
Maradona ahapụghị ohere a iji mee ka ezinụlọ ya pụọ ​​na ịda ogbenye. Nke a bụ nrọ ya, ọ hụkwara na ya na-emezu nke ahụ.
Ogologo ọrụ ya bịara dịka onye so na otu ndị otu mba Argentine nke meriri 1986 World Cup. Diego bụ ihe mgbaru ọsọ na-adịghị agbanwe agbanwe maka aghụghọ ruru unyi na ọrụ mba ụwa.
N'oge 1986 World Cup na Mexico naanị enwere mmejọ 53 megide ya. Ọrụ ya n'ebe ahụ gụnyere ihe mgbaru ọsọ abụọ a na-echefu echefu na mmeri ikpeazụ nke anọ na mmeri England:
Ejiri aka ekpe ya merie nke mbụ, nke Maradona mechara kwuo na ọ bụ ọrụ nke "Aka Chineke".
ya Ihe mgbaru ọsọ nke abụọ achọghị enyemaka karịrị nke mmadụ, ọzọ karịa ikike ụwa ọzọ iji dribble gafere mwakpo nke ndị na-agbachitere ịchọta azụ nke ụgbụ ahụ.
N'ozuzu, Maradona na-egwuri egwu na World Cup anọ, wee merie ihe mgbaru ọsọ 34 dị egwu na 91 mba ụwa maka Argentina.
Mgbe iko ụwa gasịrị, e zigara Maradona na Spanish FC Barcelona maka ụgwọ ndekọ ụwa nke $ 7.6 nde. Na 1983, Maradona nwere ike ilekwasị anya ma duzie otu iji merie Copa del Rey na Spanish Super Cup.
O nwere afọ abụọ gara nke ọma yana ihe mgbaru ọsọ 38 gbara ngụkọta nke egwuregwu 58. Ma nsogbu ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ na ndị egwuregwu mere ka a kpọga ya n'akụkụ Napoli na Itali maka ụgwọ ndekọ ụwa ọzọ nke $ 10.5.
N'agbanyeghị enweghị ọgụgụ isi ya na pitch, Maradona nke mmetụta uche bịara bụrụ onye a maara nke ọma dị ka onye na-ese okwu.
Cocaine riri ya ahụ mgbe ọ na-egwu egwu na Spain na 1980 ma nata nkwụsịtụ ọnwa 15 mgbe ọ nyochachara ihe maka ihe ahụ na 1991.
Maradona diri ntachi obi ọzọ dị elu afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, oge a maka ule dị mma maka ephedrine n'oge iko ụwa.
Diego Maradona Biography Eziokwu - Ezumike ezumike:
Maradona na-eji nwayọọ nwayọọ na-arụ ọrụ na mba ya, nkà ya na-ebelata site na ịmalite mmerụ na ọtụtụ afọ nke ndụ siri ike. Ọ mara ọkwa ezumike nká ya n'ehihie nke ụbọchị ọmụmụ ya na 1997.
Edere ya dị ka onye nyocha atọ kachasị elu maka Argentina, n'azụ Gabriel Batistuta na Hernan Crespo.
Ndụ Egwuregwu Ndụ:
Nsogbu ndị metụtara Maradona n'oge ọ na-egwu egwu na-aga n'ihu mgbe ọ lara ezumike nká.
Na gburugburu July 1998, Maradona na-anata ikpe a kwụsịtụrụ nke afọ abụọ na ọnwa 10 maka agbapụ ndị nta akụkọ nwere egbe elu na 1994.
Intake intakeụ ọgwụ ọjọọ ghọrọ ihe kacha njọ mgbe ọ lara ezumike nká. Maradona nọ n'ụlọ ọgwụ maka nsogbu obi na 2000 na 2004. N'afọ ahụ 2004 mgbe ụlọ ọgwụ gara, ọ ga-eji ihe na-eku ume iku ume nke ọma.
E zigara ya n'ụlọ ọgwụ dị na Uruguay mgbe ọ nwụsịrị. A na-akpọsa Fidel Castro ka ọ gbakee na Cuba, ma jiri ọtụtụ afọ anọ na-esote na mba ahụ.
Okwu Diego Maradona Ibu:
Ọzọ mgbe ezumike nká, ndụ ya na ọgwụ ọjọọ na-aghọ ihe a na-apụghị ịchịkwa. Omume a mere ka ọ dị arọ nke 267 pound. Nke a doro anya na nsogbu ibu. Ọtụtụ ndị hụrụ ya mgbe ahụ na-ezo aka n'afọ ya "Afọ nke Budha".
Site n'enyemaka nke ndị dọkịta dọkịta na-awa na Cartagena, Colombia, a na-arụ ọrụ mgbapụ gastric. Nwawa a na-enyere aka kpakpando ahụ na-eme ka 50kg si na 121kg dị ugbu a. Nke a mere na 2005.
Mgbe a wara ahụ ahụ, a malitere ịkatọ ụfọdụ ndị na-ahụ maka ahụike banyere nnukwu ihe ize ndụ ha mere. Ihe ize ndụ ọ bụghị naanị maka onye ọrịa ahụ, kama maka ụlọ ọgwụ. Diego Maradona gaara anwụ na usoro ahụ.
E wezụga ihe ize ndụ ahụ, ụfọdụ kwadoro ịwa ahụ ahụ ka Diego na-enupụ isi na-ekwu na ọ gaghị echefu ya nke ukwuu na ọ nwụrụ na usoro ahụ.
Ọdịdị na-adịghị mma nke Diego Armando anaghị enyere aka na-elekọta nri ya ma na-elekọta ya, n'ihi ya, o nwetaraghachi akụkụ nke ihe ndị furu efu.
Diego Maradona Biography Eziokwu - Player na Mgbaru Ọsọ nke Century Award:
Narị Afọ Iri Ọhụrụ ahụ, FIFA na amamihe ha kpebiri inye onye ọkpụkpọ nke aha afọ ahụ.
Nnyocha ntanetị nke ha na-akpọ Maradona bụ onye kachasị egwu nke 20th century. Nnukwu arụmụka soro ọkwa a.
Dika Maradona kwuru, "Ndị mmadụ tozuru oke m. Ugbu a, ha chọrọ ka m kesaa Pele. Agaghị m ekenye onye ọ bụla onyinye ahụ. "
Nke a bụ ebe beef ya na Pele malitere.
Dika ozo, onodi nzuko abuo nke Maradona megide England ka emeputara "Mgbalị nke Narị Afọ" na ntuli aka ntaneti nke 2002 nke FIFA mere.
Ọ natara bọọlụ na ọkara nke ya ma dribbled gafere ndị egwuregwu Bekee ise nwere mmetụ 11, na-ekpuchi ihe karịrị ọkara ala iji merie ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Dị ka ụtụ maka nkà na nghọta ya, ndị ọchịchị na Stadium wuru ihe oyiyi nke ya na-atụle "Mgbalị nke Narị Afọ" ma tinye ya n'ọnụ ụzọ ámá egwuregwu ahụ.
Onye Argentine Coach:
Na 2008, e goro Maradona ka ọ bụrụ onye isi mba Argentina.
Agbanyeghị na ndị Argentin nwere etu ndị isi nwere ọgụgụ isi nke Lionel Messi si wee mee ya, ikekwe onye kachasị mma na ụwa, ha si na 2010 World Cup gbaghaa 4-0 na Germany na nkeji iri na ise, ma emeghị nkwekọrịta Maradona.
N'agbanyeghi ihe ndi mmadu mebiri, Maradona ka adi n'anya n'Annerina dika nwa nwoke nke si n'onodu di umeala bia iru onu ogwu n'uwa.
Diego Maradona Tatoo Eziokwu:
Diego Maradona ugbu a nwere ise akwara, gụnyere aha ụmụ ya nwanyị abụọ “Gianinna na Dalma” na aka ọ bụla. Diego nwekwara dragọn na-egbu egbu na aka ekpe ya dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Diego Maradona nwekwara egbugbu nke onye ama ama na Marxist Argentine na-eme mgbanwe, Che Guevara, n'aka nri aka nri ya.
E kwuwo na Diego kwuru “Ebu m ya n’aka m na n’obi m. Amụtara m akụkọ ya, amụtara m ịhụ ya n'anya. Echere m na m maara eziokwu banyere ya. ”
Dika ozo, na aka ekpe ya bu ihe osise nke onye mbu bu onye isi ala nke Cuba, Fidel Castro.
Diego kwuru Nzute ya dị ka imetụ aka aka na mbara igwe. Ihe o mewooro m enweghị atụ. Ya na Chineke, ọ bụ ya mere m ji dịrị ndụ. ”
Aha Diego Maradona:
E ji aha nicknam mara Diego Maradona n'oge ọrụ ya dị ebube, ma ihe kachasị mkpa bụ “Barrilete Cósmico” na Bekee, "Oyi Ugba ”.
Aha ya bụ onye na-akọ akụkọ redio na mba Uruguayan bụ Victor Hugo Morales nyere ya na ndị Argentine ọha na eze nụrụ ya na 1986 na, mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ ahụ megide England.
"Ọrịa Kwa. Kedu mbara ala ị si bịa? " o tiri mkpu. Ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye na-ekwu okwu ahụ kwuru na ya kwenyere na ibubata Maradona bụ ihe a na-atụghị anya ya na ndị na-emegide ya ga-adị ka ịchụso egbe n'ikuku.
Diego Maradona Biography - Lovehụnanya na atkpọasị maka Napoli:
Diego Maradona bụ onye a ma ama maka oge ya na Napoli. Ọ bịara na Napoli mgbe ọ nwụsịrị na isi ụlọ ọrụ FC Bercelona Jose P. Liuis Nunez.
E zigara ya maka nde $ 10.48. Maradona bụ naanị onye ọkpụkpọ na akụkọ ntolite bọọlụ anatala ego mbufe ndekọ ụwa ugboro abụọ.
Mgbe ọ bịarutere, ndị 75,000 Fans nabatara Maradona mgbe a na-enye ya na July 5, 1984 dịka onye Player Napoli. Nbịbịa ya mere ka ndị agbapụ nwee olile anya, ha kwenyere na onye nzọpụta ahụ abiala.
Ọ buliri ụlọ elu ahụ elu n'oge ya na Napoli meriri nwa agbọghọ Serie A Italian Championship na 1986-87. Nwoke ahụ kwadoro Maradona na ememe a na-eme kwa elekere otu izu.
O nyeere Napoli aka imeri Copa Italia na 1987, iko UEFA na 1989 na Italian Supercup na 1990 ma e wezụga Serie A. A na-akpọ ọtụtụ ụmụ ọhụrụ amụrụ 'Maradona'na nsọpụrụ ya na Italytali.
Nsogbu ya na Napoli malitere mgbe ọ malitere na-egwu egwuregwu ma na-aṅụ ọgwụ ọjọọ. Nke mbụ, a na-akwụ ya ụgwọ maka $ 70,000 na ụlọ ọrụ ya maka egwuregwu na omume ndị na-efu n'ihi nrụgide. Uzo ogwu cocaine ya gara n'ihu wee jikota ya na Camorra.
O jere ozi na 15 ọnwa maka ịkwụsị ule ọgwụ maka cocaine ma Napoli tọhapụrụ ya na 1992. N'ihi nsọpụrụ ya na maka ihe ndị ọ rụzuru, Napoli bụ onye na-agba ọsọ NN 10 lara ezumike nká.
Maradona na 1996: “Anọ m, anọ m, mgbe niilekwa ga-abụ onye ọgwụ riri ahụ. Onye tinye aka n'ị hasụ ọgwụ ọjọọ aghaghị ịlụ ọgụ kwa ụbọchị. ”
Ọ hapụrụ ụgwọ Napoli ka ọ na-akwụ onye ụtụ isi Italiantali. Ndị isi ọrụ kwuru na 2009 na Maradona ji ha ụgwọ nde Euro 37. Otú ọ dị, ihe karịrị ọkara nke a bụ mmasị na ụgwọ mbụ.
Diego Maradona Football arụsị:
Onye Brazil Brazil Rivelino na George Best nke Ireland Northern Ireland nyere ya ume mgbe o tolitere.
Diego Maradona nwere mmasị maka obi ike ha, ọganihu ndị dị ịrịba ama na àgwà ọma.
Diego Maradona Aka nke Chineke Onye Ntughari aka:
Ali bin Nasser bụ onye na-eme egwuregwu ahụ na-eduzi egwuregwu ahụ ma na-afụ ụda mgbe Maradona meriri “Aka Chineke”. Maradona mgbe afọ 29 gara ileta Ali bin Nasser.
Nleta a na-adọrọ mmasị mere na August 17, 2015. Maradona gara Tunisia niile ma nye ụtụ na onye ọka ikpe ya na inye ya Argentine Jersey bịanyere aka na ya.
Ọ bụ Ali Bin Nasser onye guzoro na-agba bọl na foto dị n'okpuru ebe a.
Na-ezute ya 'enyi ebighi ebi' na inye ya aha Argentinine a bịanyere aka na ya pụtara ọtụtụ ihe.
Diego Maradona sutuo ya ma jidesie nwoke ahu obi ya.Ha abụọ chịrị ọchị mgbe afọ 29 gachara.
Nke a emeela ka ndị nkatọ dị egwu n'etiti ndị England na ndị na-akwado ya. Hkpọasị ha nke gosipụtara ka aka mee ka ha abụọ dị nro gbagoro na mberede.
Onye nchikorita Tunisian Ali bin Nasser mgbe a jụrụ ya ihe mere o ji mee mkpebi ahụ bụ Dochev, onye na-ekwu okwu.
"Anọ m na-eche Dochev ka ọ kọwaara m ihe merenụ mana ọ zaghị mgba bọọlụ," Bin Nasser kwuru. N'agbanyeghị na ọ na-agbalị ịkwanye ya ịkpọasị, ndị ọzọ abụọ kesara ya.
Diego Maradona Aka nke Chineke Linesman:
Nke mbu, Linesman, onye Bulgarian nke kọghị akụkọ Diego Maradona nke aka Chineke nwụrụ. Ọ nwụrụ mgbe ọ dị afọ 80.
Bogdan Dochev ji oge ọ bụla nke ndụ ya tụgharịa uche maka ihe kpatara na ọ ka nwere ike ịhụ aka Maradona nke Chukwu na 1986 World Cup.
Bogdan Dotchev kwuru banyere ihe ahụ mere: “Ọ bụ ezie na enwere m mmetụta ozugbo enwere ihe na-adịghị agbanwe agbanwe, laa azụ n’oge ahụ Fifa ekweghị ka ndị enyemaka ahụ soro onye ọka ikpe tụlee mkpebi ahụ.
Ọ bụrụ na Fifa tinye onye ọka ikpe si Europe ka ọ bụrụ onye nlekọta maka egwuregwu dị mkpa a, a ga-egbochi isi mmalite nke Maradona. "
O kwuru na mbụ: “Diego Maradona bibiri ndụ m. Ọ bụ onye na-agba ama egwuregwu ma onye obere na onye nzuzu. Ọ dị obere na amamihe na dịka mmadụ.
Ntuziaka Fifa nyere anyị tupu egwuregwu ahụ apụta ìhè - ọ bụrụ na onye otu m nọ n'ọnọdụ dị mma karịa nke m, m kwesịrị ịkwanyere echiche ya ùgwù. "
Diego Maradona Biography - Njikọ ya na Gadaffi:
Na 2003, Al-Saadi, nwa nwoke nke atọ nke Muammar Gaddafi, họpụtara Maradona dịka onye ndụmọdụ ọkachamara. Al-Saadi n'oge ahụ na-egwu egwu na Serie A maka Perugia Calcio.
Njikọ Maradona na ezinụlọ Gadaffi- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe.
N'etiti ọha mmadụ nke oge a, anyị na-ahụ ndị egwuregwu dị ka arụsị ma debe ha n'elu ebe ụwa niile ga-ahụ. Ma, hà kwesiri chi nke chi?
Ha doro anya na ọkwa kachasị elu nke ihe ha na-eme, mana iji fee ha ofufe? nke ahụ dị n'ogo ọhụrụ.
Ndi amaara '.. Argentine Fans malitere a "Chọọchị Maradona" na Buenos Aires na 1998.
Chọọchị Maradona na-akwado nkwado a dum. Ndị na-eso ụzọ a na-efe ofufe nwoke a n'ezie "Chineke" ụkwụ aka ekpe ọ na-egosipụta mgbe ọ na-arịgo na pitch.
N'ime ndị na-eso ụzọ 120,000, Chọọchị Maradona na-efe Diego Maradona, akụkọ egwuregwu bọọlụ Argentina lara ezumike nká, dịka chi. Ndị na-eso ụzọ a kee Iwu nke Iri nke ha, Ekpere Onyenwe Anyị, ọbụnakwa nwee ederede okpukpe ha.
Chọọchị Maradona Alter.
Ndị na-eso ụzọ nwekwara Ekpere Onyenwe ha!
"Diego anyị, bụ onye nọ n'ụwa, mee ka aka ekpe gị dị nsọ, ịchọọ anwansi gị bịara, ha ga-echeta ihe mgbaru ọsọ."
Ndị na-eso ụzọ ụka bi na Chineke ha Diego. Ndụ ya bụ nke ha. Oge dị oke egwu o chere na ọgwụ ike riri ya ahụ metụtara ndị otu niile na-eso ụzọ.
Ọbụna ha agbanweela afọ dị ugbu a iji zute ọmụmụ nke Diego ha hụrụ n'anya. Dịka ọmụmaatụ, afọ 2016 na Chọọchị Maradona ga-abụ 56 AD (Mgbe Diego).
Ha na-eme ememme ncheta ọmụmụ nke Diego Diego dị ka ụdị ememe Krismas.
Churchlọ ime ụlọ nke Maradona.
Ha na-eme ka osisi ha na ebe obibi ha dị mma na isiokwu nke Maradona na agba nke ọkọlọtọ Argentina. Chọọchị nwekwara ihe atọrọ nke iri na onye nke ọ bụla ga-agbaso iji nweta ihe nketa nke ntọala ahụ.
N'okpuru ebe a bụ Iwu Maradona Iri;
Ga-enwerịrị Churchka nke Maradona Alter n'ụlọ gị Churchka nke Maradona's Alter
Ịkụ football karịa ihe ọ bụla ọzọ
Kpọsaa ịhụnanya maka ọnwụ Diego na ịma mma nke football
Chebe uwe elu Argentina
Gbasaa ozi banyere ọrụ ebube Diego
Na-asọpụrụ ụlọ nsọ ebe ọ na-egwuri egwu na uwe elu ya
Ekwula na Diego dịka otu onye otu
Kwusaa ma gbasaa ụkpụrụ nke ụka
Mee Diego aha n'etiti gị
Kwuo nwa mbu gị nwoke Diego
Diego Maradona Bio - Agha nke Okwu megide Pele:
Maradona Vs Pele.
Na agha na-aga n'ihu na-adị n'etiti Maradona na Pele kemgbe Maradona's Player nke narị afọ na-emeri. N'okpuru ebe a bụ okwu agha dị n'etiti ha.
Pele kwuru n'oge ọchịchị Maradona dịka onyeisi ndị otu mba: “Ma ọ bụghị Maradona kpatara ya. Ọ bụ ihe kpatara onye ọ bụla mere ya onyeisi. ” ..Onye Argentine ahụ laghachiri n'azụ, sị: “Pele kwesịrị ịlaghachi na ụlọ ihe ngosi nka. Nọrọ ebe ahụ. ”
Ackwakpo ndị nkatọ:
Mgbe o kwusịrị igwefoto ihe igwefoto ka ọ bụrụ onye mkparịta ụka, Diego kwuru "Emere m ya n'echiche."
Maradona agbachitere Lionel Messi n'ụzọ siri ike mgbe ọ bụla e boro ya ebubo. Na July 2, 2010, mgbe o kwuru, sị: "Onye ọ bụla na-ekwu na ya enweghị nnukwu World Cup bụ onye nzuzu."
2010 World Cup- Agbanyeghi mmeri a dị egwu otu ahụ jisiri ike banye asọmpi ahụ.
Ndị na-akatọ ya Maradona jụrụ ya. "TO ndị na-ekweghị: Ugbu a s ** k my d ** k - gbaghara ndị nwatakịrị maka okwu m - ma nọgide na-aṅụ ya g g. Ana m acha ọcha ma ọ bụ oji.
FIFA enweghi obi uto banyere oke iwe a. Ha mara ya iwu ọnwa abụọ.
Mmegide FIFA- Maradona nwetara mmegwara nke onwe ya megide FIFA mgbe ọ na-eme mkpesa n'ụzọ dị egwu banyere bọọlụ ọhụrụ a ga-eji mee egwuregwu 2010 World Cup na South Africa.
O kwuru- "M ga-agwa ndị nduzi Fifa niile ka ha kwụsị ikwu banyere m na ịmalite ịrụ ọrụ na ịgba bọlbụ kwesịrị ekwesị. Akuku a abaghị uru. Ọ gaghị ekwe omume ịchịkwa. "
1998 World Cup- Laa azụ na 1998 o kwuru, banyere iko ụwa nke afọ ahụ. “Ndị na-eme egwuregwu niile nwere square ụkwụ.
Ha dị ka Robocops, ha nwere mkpa mmanu karịa ịhịa aka n'ahụ. Ekwetaghị m na asọmpi ahụ nwere ike ịka njọ.
Ihe kpatara ọnwụ Diego Maradona:
The Football icon Diego Maradona nwụrụ na 60 na 25th ụbọchị nke November 2020 na-eso nkụchi obi.
Nke a bịara mgbe ọ na-agbake n'ụlọ ya (na Tigre) mgbe ọ gbasịrị ịwa ahụ ụbụrụ na mbido November 2020.
Maradona nwere ọbara ọgbụgba na ụbụrụ wee mee mkpesa banyere mmụọ na ike ọgwụgwụ tupu ọnwụ ọjọọ ya.
Francesco Totti Nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Michael Owen Childhood Story Plus Na-agbaghaghị Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị Na-eme Eme
Roberto Carlos Child Story Story na-emeghe akụkọ ihe omuma
Diego Armando Maradona. Nanị 1.
Diego Armando Maradona fue un crack indiscutible en el futbol, ​​posiblemente el mejor de todos los tiempos hasta hoy, pero en el plano personal fue un mal ejemplo para la civilización, prepotente, impúdico, inmoral, indecente, dum eso sabiendo que era intocable…. era totalmente y mentalmente un ser marginal, nacido en un barrio de clases muy bajas, de gente pobre que no puede salir de su pobreza…. un tipo “antisistema” impune por su fama, capaz de rebajar y ofender a cualquiera ……… .. y en definitiva totalmente “descartable” Consrando el avance del ser humano…. de “australopitecus” otu mono ……….
Antoine Griezmann Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ọhụụ
Bọchị gbanwee: Mee 14, 2021